जीवन के हो ? मृत्युपछिकाे यात्रा के हुन्छ ? बुद्ध यसो भन्छन्… – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : एकपटक गौतम बुद्ध आफ्ना शिष्यका साथ संवादमा व्यस्त थिए । उनीहरू बुद्धसित अनेक प्रश्न सोधिरहेका थिए । बुद्ध पनि यथोचित उत्तर दिएर उनीहरूको जिज्ञासा शान्त बनाइरहेका थिए । यसै क्रममा एक शिष्यले उनलाई सोधे– भगवान्, तपाईंले आजसम्म हामीलाई धेरै कुराको ज्ञान दिएर बाटो देखाउनुभएको छ । तर, हजुरले आजसम्म हामीलाई मानिसको मृत्युपश्चात् के हुन्छ भन्ने विषयमा केही पनि भन्नुभएको छैन ।
उनको जिज्ञासा सुनेर बुद्ध मुसुक्क हाँसेर गम्भीरतापूर्वक उनले भने– हो त है, मैले यसबारे तिमीहरूलाई केही पनि भनेको छैन । ठिकै छ आज म तिमीहरूलाई यसबारे भन्नेछु ।
तर, यसबारे भन्नुअघि तिमीहरू मेरो एउटा प्रश्नको जवाफ देओ । उनका शिष्यले भने– आज्ञा होस् प्रभु ! बुद्धले भने– एकजना मानिस सुनसान जंगलको बाटो कतै जाँदै थियो । अचानक कतैबाट आएर एउटा विषालु वाण उसको शरीरमा घुस्यो । यस्तो अवस्थामा उसले तत्काल के गर्नु उचित हुन्छ ?
पहिले शरीरमा घुसेको वाण हटाउनु ठीक हुन्छ कि त्यो वाण कसले चलाएको थियो, कताबाट आएको थियो र कसलाई लक्ष्य गरेर चलाइएको थियो, त्यो पत्ता लगाउनु उचित हुन्छ ? प्रश्नकर्ता शिष्यले जवाफ दिए– उसले सबैभन्दा पहिले शरीरमा घुसेको वाण निकाल्नुपर्छ । अन्यथा वाणको विष पूरै शरीरमा फैलिएर उसको ज्यानै पनि जान सक्छ ।
शिष्यको जवाफ सुनेपछि बुद्धले भने– तिमीले ठीक भन्यौ । अब तिमी मलाई अर्को एउटा प्रश्नको जवाफ देऊ । हामीले सबैभन्दा पहिले यस जीवनका दुःखको निवारणको उपाय खोज्नु ठीक हुन्छ कि मृत्युपछि के हुन्छ भनेर टाउको दुखाउनु ठीक हुन्छ ? बुद्धको प्रश्न सुनेपछि शिष्यको जिज्ञासा शान्त भयो l
Prevहेलम्बुका स्थानीयबासी भन्छन्, ‘माथि बसेर आफ्नो घर बगाउने पालो कुरेर बसिरहेका छौँ’
Nextजात थाहा पाएपछि कोठा नदिने घरबेटीविरुद्ध रूपाले प्रहरीमा दिइन् जाहेरी
मृत छोरा ब्यूँताउन पुगेकी महिलालाई बुद्धले दिए यस्तो ज्ञान
जति बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला, तपाईंको जीवनमा यस्तो हुन बाट बच्नुहोस्..,!